Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Kacdoonkii Oromada Oo Mar Kale Dib Uqarxay.
Daawo: Kacdoonkii Oromada Oo Mar Kale Dib Uqarxay.
Posted by Dulmane	/ May 29, 2016
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Oromia ayaa sheegaya in ay cirka isku shareereen kacdoonkii shacabka Oromadu ay kaga soo horjeedeen xukunka qalafsan ee wayaanaha.
Sida warku sheegayo waxaa maanta iyo shalay guud ahaan dhulka Oromada hadheeyay mudaharaadyo ay dad dhalinyaro ubadan oo cadhaysan wadaan kuwaas oo burburinaya dhamaan xafiisyada iyo xarumaha dowlada.
mudaharaadka ayaa si isku mid ah aadna u xoog badan uga socda gobolada Ginji, Jimma, Wolega, Galbeedka Herar iyo nawaaxiga Adis-ababa waxayna dadwaynuhu xidheen dhamaan isusocodkii dagmooyinka iyo gobolada wadanka halka ay dab qabadsiiyeen xarumo dowladeed.
mudaharaadada rabshadaha wata ee ay wadaan shacabka Oromada ayaa galay bishii 7aad oo xidhiidh ah waxayna mudadaas qulub kurideen talada wadanka oo awalba aan cago badan kutaagnayn waxayna uga siidareen niyad jabkii taliska wayaanaha.
shacabka Oromia oo ah shacab aad ubadan oo tiradooda lagu qiyaaso 40 milyan ayaa si isku mid ah u dareemay cadaasiska shacabka Oromia mudada qarniyada ah saaran waxayna ciroole iyo caruurba u istaageen sidii ay isaga dul qaadi lahaayeen kooxda tirada yar ee Tigree ee dadkooda gumaadka ugaysata.
inkasta oo Arday iyo dad kale oo shacab ah oo Oromia udhashay dhaawac iyo dhimashaba loogaystay hadana shacabka Oromadu waxay gaadheen guulo aad ubadan waxayna ogaadeen in lala dagaalami karo ciidanka wayaanaha waliba laga furan karo hubka iyo xeryahooda ciidanka.
dhinaca kale waxaa xabsiyada dhoohan dad shacab ah oo loosoo xidhay qadiyada laxidhiidha kacdoonka Oromada mase aha wax joojinaya kacdoonada sida wabiga usocda.